Akasitholi isitifiketi sengane yesibili owabeletha kabili onyakeni ka-2012 | News24
Akasitholi isitifiketi sengane yesibili owabeletha kabili onyakeni ka-2012
Johannesburg - Owesifazane uNompumelelo Caluza sekuphele iminyaka emihlanu ezama ukuthola isitifiketi sokuzalwa kwendodakazi yakhe esineminyaka engu-6 ubudala emnyangweni wezasekhaya eProspecton eSipingo, eningizimu yeTheku.
UCaluza utshele abezindaba iGroundUp ukuthi iziphathimandla zinqabile ukukholwa ukuthi wabeletha kabili onyakeni owodwa.
"Ngomhlaka-28 Januwari 2012, ngabeletha indodakazi yami yokuqala. Ngemuva kwamasonto amabili ngaphinde ngakhulelwa. Kulokhu ngakhulelwa amawele engawabeletha ngomhlaka-6 Okthoba 2012," kusho uCaluza.
Amawele, uLubanzi noLukhona, bazalwa ngaphambi kwesikhathi babe sebefakwa wbhodleleni.
"Ngeshwa uLubansi washona kodwa uLukhona waphila. Ngesikhathi sesiphuma esibhedlela iPrince Mshiyeni, ngazama ukufaka isicelo sokutholela uLukhona isitifikezi sokuzalwa, kodwa abomnyango wezindaba zasekhaya basinqaba isicelo sami, njengoba kwakusavela ukuthi ngasithola ngoJanuwari isitifiketi sokuzalwa kwengane ngawo u-2012," kusho uCaluza.
OLUNYE UDABA:Ikhethe ukuzibulala intombazane ebingenaso isitifiketi sokuzalwa
Uthe ulokhe ephuma engena emnyangweni ezama indaba yesitifiketi sengane yakhe, kodwa iziphathimandla zimtshela ukuthi isicelo sakhe asiphumeleli.
"Njengamanje, indodakazi yami kufanele engabe yenza ugrade 1 kodwa ayikwazi ukubhalisa ngenxa yokuthi ayinaso isitifiketi. Angazi ukuthi ngenze njani," kusho uCaluza.
UCaluza unezincwadi ezikhomba kona ukuthi wabeletha kabili onyakeni ka-2012, ngoJanuwari nango-Okthoba futhi unaso nesitifiketui sokushona kukaLubanzi.
Okhulumela umnyango kwazulu-anatal uCyril Mncwabe, uthe inkinga kaCaluza ingaxazululeka.
"Ngizoxhumana negatsha ukuzwa ukuthi bazothini ngalolu daba. Ngizophinde ngishayele uCaluza ukuthola uhlangothi lwakhe ngalolu daba mase ngiqhuba inqubo yesitifiketi. Ngizokuqinisekisa ukuthi uyasizakala," kusho uMncwabe.